Home Wararka Guddiga Doorashada Heer Federal oo hakiyey doorashada kursiga loo xiray Fahad Yaasiin
Guddiga Doorashada Heer Federal oo hakiyey doorashada kursiga loo xiray Fahad Yaasiin
Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal ayaa ku dhowaaqay in la hakiyey qabashada doorashada kursiga HOP#86, oo lagu waday in maalinta Axadd ay ka dhacdo magaalada Beledweyne.
Kursigan ayaa ah kan ugu hadal haynta iyo saameynta badan sanadkan, sababtoo ah waxaa u sharaxan islamarkaana loo xiray taliyihii hore ee NISA iyo la-taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo ah ninka ugu awoodda badan siyaasadda Soomaaliya.
Go’aanka Guddiga ayaa imanaya ayada oo lagu waday in Fahad Yaasiin uu maanta oo Jimce ah u safro magaalada Beledweyne, si uu isugu diyaariyo doorashada kursigan.
Kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiya xildhibaan Faarax Cabdulqaadir oo sida Fahad oo kale saameyn xooggan ku lahaa dowladdii Xasan Sheekh, islamarkaana hadda arrimo caafimaad dalka uga maqan.
Ma cadda tallaabada ay qaadi doonaan Fahad iyo maamulka HirShabelle oo ay ka go’an tahay in Fahad sanadkan xildhibana laga dhigo, islamarkaana uu si fudud kusoo qaato kursigan.
Guddiga Doorashada HirShabeelle ayaa shalay shaaciyey odayaasha soo xulaya eregada doornaeysa saddex kursi oo uu ku jiro midka uu doonayo inuu soo qaato agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Sidoo kale, Muuqaal sawir ah kii ugu horeeyay oo laga qaaday Fahad Yaasiin ayuu shalay baahiyey sawir-qaadaha Farmaajo, waxaana sawirkaasi uu nooqnayaa shan sano kadib inuu ogolaaday sawir in laga qaado, isagoo hadda doonaya kursi xildhibaan.
Hoos ka aqriso warqadda guddiga
Previous articleCiidanka Dowladda oo toogasho ku dilay Gabar dhaqtar ka aheyd Digfeer
Next articleMustafa Cagjar oo xiray siyaasi ka tirsanaa xukuumadda degaanka Soomaalida
[XOG] Musharaxiin lagu wado in aay tanaasulaan ka hor maalinta Doorashada
[Prof: Jawaari] Si xal deg deg ah loo helo waa in...